WordPress: Ahoana ny fitanisana ireo pejin-jaza (Plugin-ko farany) | Martech Zone
WordPress: Ahoana ny fitanisana ireo pejin-jaza (Plugin-ko farany)
Zoma, Jolay 13, 2018 Zoma, Jolay 13, 2018 Douglas Karr
Nanangana ny ambaratongam-pahefana ho an'ny mpanjifanay WordPress marobe izahay, ary iray amin'ireo zavatra ezahinay hatao ny mandamina tsara ny fampahalalana. Mba hanaovana izany dia matetika no te-hamorona pejy master izahay ary hampiditra menio izay mitanisa ireo pejy rehetra eo ambaniny. Lisitry ny pejin-jaza, na zana-pejy. Mampalahelo fa tsy misy fiasa na endri-javatra voajanahary hanaovana an'io ao amin'ny WordPress, ka dia nanamboatra a Kaody fohy Subpages ao amin'ny lisitra WordPress ampidirina ao amin'ny rakitra fonosan'ny lohahevitry ny client.php.
Tsotra ny fampiasana:
Tsy misy pejy ho an'ny ankizy
aclass - Raha te-hampiditra kilasy amin'ny lisitra tsy voadinika ianao dia ampidiro eto.
ifempty - Raha tsy misy pejin-jaza dia azonao atao ny mampiditra lahatsoratra. Mety ho mora ampiasaina izany raha toa ka lisitry ny fisokafana asa… azonao atao ny miditra ao amin'ny “Tsy misy fisokafana ankehitriny.”
afa-po - Ity ny atiny izay aseho alohan'ny lisitra tsy voafehy.
Ankoatr'izay, raha tianao a sombiny fohy mamaritra ny pejy tsirairay, ny plugin dia mamela sombintsombiny amin'ny pejy hahafahanao manitsy an'io atiny io eo amin'ny fikirakiran'ny pejy.
Vetivety aho dia nitodika nanosika ilay kaody ho ao anaty plugin mba hahamora ny fametrahana sy ny fampiasana azy ary ny Tanisao ny pejy Child Shortcode plugin nankatoavin'ny WordPress androany! Azafady ampidino ary apetraho izany - raha tianao ny manome famerenana!
Tags: tanisao ny pejin-jazalisitra ireo pejyPluginshortcodesWordPressplugin WordPress
FindThatLead Prospector: Mikaroha ary tadiavo ireo adiresy mailaka kendrena kendrena